ဘုံပရင်တာပရင့်ထုတ်ရန်အ PVC အဖြူရောင်ကဒ်, ဘုံပရင်တာပရင့်ထုတ်ရန်အ PVC Blank ကကဒ်, ဘုံပရင်တာပရင့်ထုတ်ရန်အပလတ်စတစ် Blank ကကဒ်, ဘုံပရင်တာပရင့်ထုတ်ရန်အပလတ်စတစ်အဖြူရောင်ကဒ်, ဘုံပရင်တာပရင့်ထုတ်ရန်အပလတ်စတစ်ကဒ်, ဘုံပရင်တာပရင့်ထုတ်ရန်အ PVC Card ကို
ပရင့်ထုတ်ရန်အ Card ကို ဘုံပရင်တာပရင့်ထုတ်ရန်အပလတ်စတစ်ကဒ်, ဘုံပရင်တာပရင့်ထုတ်ရန်အပလတ်စတစ်အဖြူရောင်ကဒ်, ဘုံပရင်တာပရင့်ထုတ်ရန်အ PVC Blank ကကဒ်, ဘုံပရင်တာပရင့်ထုတ်ရန်အ PVC အဖြူရောင်ကဒ်
print ထုတ်လို့ရတဲ့ပလပ်စတစ်ပါးပါးရုပ်ရှင်တစ်အလွှာကိုထည့်သွင်းဖို့ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အဖြစ်များသည့်ပရင်တာပရင့်ထုတ်ရန်အ PVC အဖြူရောင်ကဒ်, ကဒ်အရွယ်အစား 86 × 54mm, 0.25 ~ 1.0mm ၏စိတ်ကြိုက်ထူ), HITI များအတွက်သင့်လျော်သော, DATACARD, မြင်းကျား, တဖက်, EVOLIS, Magicad, JVC, Frgoo နှင့်အခြားကဒ်ပရင်တာ.
ဤကတ် inkjet ပရင်တာနှင့်အတူ print ထုတ်လို့မရဘူး! သင်တစ်ဦး Inkjet Printer-တိကျတဲ့ပရင့်ထုတ်ရန်အပလတ်စတစ်ကဒ်လိုအပ်ခဲ့လျှင်, ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: Inkjet Printer တိုက်ရိုက် Print ကို PVC Card ကို.
ငါသည်သင်တို့၏ထုတ်ကုန်အဖြစ်များသည့်ပရင်တာပရင့်ထုတ်ရန်အ PVC အဖြူရောင်ကဒ်ကိုစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်
RFID ဆကျကပျ Tag ကို (90)
anti-သတ္တု Tag ကို (29)